थोरै गीत गाएर दर्शक तथा श्रोताको मन जित्ने गायकहरूमध्येका एक हुन् आशिष सचिन । लामो समयदेखि संगीतको विद्यार्थीका रूपमा रहेका उनले अघिल्लो वर्षको दसैंअघि आफ्नो पहिलो एल्बम ‘आरोही’ को दोस्रो गीत ‘पिरिम नलाउने...’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरे । १३ महिनाको अवधिमा मेलिना राईसँगको उक्त युगल गीत ५ करोड १९ लाख पटक हेरिएको छ भने करिब ४ हजार ८ सय प्रतिक्रिया पाएको छ । यसै वर्षको दसैंमा उनले ‘एक कान दुई कान मैदान’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरे, जसले छोटो समयमै १ करोडभन्दा बढी दर्शक पाइसकेको छ । सांगीतिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेका यिनै गायक आशिष सचिनसँग साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईको कुराकानी :
पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भैरहेको छु । भर्खरै देशबाहिर केही सहरमा लाइभ कन्सर्ट गरेर फर्किएको छु । निकट भविष्यमै संगीतकार दीपक शर्माको संगीत निर्देशनमा एउटा नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छु । स्वदेशका सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाइरहेको छु ।
सांगीतिक व्यस्तता कत्तिको बढेको छ ?
पछिल्लो एक वर्ष म सांगीतिक व्यस्ततामै रमाइरहेको छु । दुई वर्षअघि पहिलो एल्बम सार्वजनिक गरे पनि अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक भएको पिरिम नलाउने...गीत मेरो करियरमा कोसेढुंगाका रूपमा रह्यो । उक्त गीतको सफलतापछि मैले फुर्सदले बस्नुपरेको छैन । दर्शक तथा श्रोताले देश तथा विदेशबाट यति धेरै माया दिनुभयो, मैले गाएको तथा अभिनय र नृत्य गरेको गीतलाई यति धेरै मन पराइदिनुभयो । त्यसैको फलस्वरूप मेरो स्टेज कार्यक्रमको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । सांगीतिक कार्यक्रममा यति धेरै व्यस्त हुनेछु भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ ।
पिरिम नलाउने गीतको सफलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
युट्युबमा ५ करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको गीतका लागि दर्शकको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट हजारौं सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । अधिकांशले यो गीत आफ्नै वास्तविक जीवनसँग मेल खाएको कुरा बताइरहनुभएको छ भने कतिपयले विदेशबाट सकेसम्म छिटो स्वदेश फर्कने योजना सुनाउनुभएको छ । कतिपयले विदेश जाने सोच नै त्यागेको बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमै प्रभाव पार्ने गीतमा त्यस्तो के छ ?
तीन महिनामा एक पटक पनि गाउँमा नआउने व्यक्तिसँग माया, प्रेम, घरबार कसरी होला ? भन्ने जिज्ञासा उठाइएको छ । यही कुराले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई यो गीतले छोएको अनुभव गरेको छु । दु:ख–सुख जे भए पनि आफ्नै देशमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सन्देशले अधिकांश दर्शक तथा श्रोताको मन जित्न सफल भएको छ । यति राम्रो गीत बनाइदिनुभएकोमा संगीतकार तथा गीतकार दीपक शर्माप्रति कृतज्ञ छु ।
पछिल्लो गीत एक कान दुई कान पनि उत्तिकै लोकप्रिय भयो है ?
यसपटकको दसैंअघि मेरो नयाँ गीत ‘एक कान दुई कान मैदान भैदियो,’ सार्वजनिक गरेको थिएँ । नेपाली ग्रामिण परिवेश, नेपाली संस्कृति, नेपाली माटोको वासना आउने यो गीतले पनि सफलताको बाटो समातिसकेको छ । गत देउसी–भैलोदेखि टिकटकमा यसलाई अत्यन्त रुचाइएको पाएको छु । कभर भिडियो बनाउने क्रम पनि बढेको छ ।
गीतको सफलताले एवार्ड समेत दिलायो है ?
मैले यसै वर्ष वितरण गरिएका इमेज एवार्डदेखि जिनियस म्युजिक एवार्ड, योङ माइन्ड एवार्डमा विभिन्न विधामा एवार्डहरू जितिसकेको छु । वितरण हुन बाँकि रहेका थुप्रै एवार्डका लागिसमेत मनोनीत भएको छु ।
सांगीतिक यात्रालाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
कुनै पनि कलाकार जति संघर्ष गरेर शिखर चुचुरोमा पुगेको हुन्छ, त्यो सफलतालाई बचाइराख्न गाह्रो हुन्छ । म सधैं लोकप्रिय भैरहन्छु भन्ने त छैन, तर आगामी दिनमा सांगीतिक क्षेत्रमा अझ बढी मेहनत गर्ने योजना बनाएको छु । गीत–संगीतलाई मैले केवल रमाइलो गर्ने माध्यम होइन, सामाजिक तथा सन्देशमूलक समेत होस् भन्ने कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छु ।
संगीतलाई करियर बनाउनुभएको छ कि सौखमा मात्र सीमित पार्नुभएको छ ?
यो क्षेत्रमा लामो समय बिताइसकेका कारण आजको मितिमा मैले यसलाई करियर नै बनाइसकेको छु । जीविकोपार्जनको पहिलो माध्यम नै गीत–संगीतलाई बनाइसकेको छु ।
नेपाली संगीतका पारखीलाई कस्तो प्रकारको गीत–संगीतले छुन्छ भन्ने अनुभव गर्नुभएको छ ?
संगीतको कुनै भाषा हुँदैन । संगीत भनेको अनुभव गर्ने कुरा हो । संगीतका विधा फरक–फरक भए पनि त्यसले दर्शक तथा श्रोताको मन छुन सक्नुपर्छ, एउटा सन्देश दिनुपर्छ । जीवनमा घटिरहेका घटनाक्रम तथा परिवेशलाई गीतमा व्यक्त गर्न सकियो भने त्यस्ता गीतले दर्शक तथा श्रोताको मनलाई सहजै छुन सक्छ ।
ह्वाट्स योर नेम...शीर्षकको गीत निकट भविष्यमै श्रोतामाझ आउँदैछ । लगत्तै केही गीतकार, संगीतकार तथा गायिकाहरूसँग सहकार्य गरेर उत्कृष्ट गीत तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय भैरहेको छु ।